विदेशी आकाशमा उड्ने नेपाली ‘परी’हरुको कथा – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > विदेशी आकाशमा उड्ने नेपाली ‘परी’हरुको कथा
admin March 25, 2021 जीवनशैली, विचार	0
सुमीका अहिले पाँचसय यात्रु बोक्ने एयर बसमा सुपरभाइजर एयर होस्टेज छन् । फर्स्ट क्लास र बिजनेस क्लासका यात्रुहरूको खातिरदारी गर्दै उनी संसारभर घुमिरहेकी हुन्छिन् । दिनैपिच्छे नयाँ-नयाँ मान्छेको संगत, नयाँ-नयाँ ठाउँको दृश्यावलोकन, पाँचतारे होटलको बसाइँ उनलाई यो पेशा उड्न परीभन्दा कम लागेको छैन् । ओमान एयरमा सुमीकाजस्तै एघार नेपाली परी कार्यरत छन् । तिमी अर्को जन्ममा के हुन चाहान्छौँ ? धेरैको उत्तर हुन्छ– चरा ।
त्यसो त ओमान एयरमा काम गर्ने नेपाली चेलीहरू योजना बनाएर एयर होस्टेज भएका होइनन् । एकाध मोड्लिङ, फेसन डिजाइन हुँदै अधिकांश विद्यार्थी जीवनबाटै एयर होस्टेज हुन आइपुगेका हुन् । प्रसार योगी, वविता राई, शिष्मा भण्डारी, शीतल मास्के, नसिम प्रधान, पुष्पा गुरुङ र सुष्मिता गुरुङ पाँच वर्षदेखि उडान शयरमा छन् ।
उनीहरूले कहिले बोइङ त कहिले एयरबसमा काम गर्नुपर्छ । एयरबसमा काम गर्नेले महिनाको ६ फ्लाइटसम्म उडान भर्नुपर्छ भने बोइङमा काम गर्नेले १५ उडानसम्म भ्याउनुपर्छ । उडान अवधिभर १२ घण्टा जागा रहनुपर्छ । महिनामा एक साता आराम गर्ने अवसर पाइन्छ । फरक क्षेत्रबाट आएकाले धेरैलाई यो पेशा शुरुमा अचम्म लागेको थियो रे ! उनीहरू भन्छन्– पहिलो उडानमा आफू परिचारिका हुँ भन्नेसम्म पनि ख्याल रहेन् ।
उडान अवधिभर थोरै रोमाञ्चक र धेरै त्रासले थिचिरह्यो । कतै बिग्रिने पो हो कि भन्ने डरले उडानको अनुभव नै भएन् । पछि बानी पर्दै गएपछि भने उनीहरूले बल्ल संसार बुझ्न थाले । एकदिन युरोप त एकदिन अमेरिकाको घुमाइले उनीहरूमा अर्कै आनन्दले घर गर्न थाल्यो । नयाँ मान्छेसँगको भेटले आफूभित्र पनि नयाँ सोच आएको अनुभूति हुन थाल्यो ।
अझ नेपाल रुटमा उडान पर्दा नेपाली दाजुभाइहरूलाई ‘आफू पनि नेपाली हुँ’ भनेर परिचय दिँदा देखिने न्यानोपनले थप ऊर्जा दिने उनीहरूको भोगाइ छ । जहाजको सानो झ्यालबाट संसारका चमत्कारहरू हेर्न पाउँदा यिनीहरू दंगदास पर्दा रहेछन् । भन्छन्– ‘मिलानको रोम, पेरिसको आइफेल टावर, लण्डनका प्राचीन स्मारक, जर्मनी, भारत, मलेशिया, श्रीलंका र बैंककको आकासबाट धर्तीमा देखिने दृश्य हेरेर कहिलेकाहीँ त हामी कहालिएका पनि छौँ ।’
यी परीहरूको अनुभवमा आकासबाट देखिने ती वस्तु संसारको सबैभन्दा सिपालु शिल्पीले बनाएको आकृतिभन्दा पनि राम्रो देखिन्छ । यसखाले उत्सुकता र जिज्ञासै-जिज्ञासाले भरिएको जागिरमा उनीहरूले कसरी प्रवेश पाए त ? ओमान एयरमा जनशक्ति ल्याउने जिम्मेवारी लिएको एक मेनपावर कम्पनीमार्फत उनीहरू त्यहाँ गएका रहेछन् । तर, ओमान एयरबाट छनोटका लागि आएको टोलीले काठमाडौं र ओमानमा पटक-पटक अन्तर्वार्ता लिएर उनीहरूलाई छानेको रहेछ । शारीरिक बनावट, सौन्दर्य, भाषा, दैनिक आहारविहारदेखि पौडी खेल्नसम्म दक्ष सुन्दरीहरू छनोटमा परेका रहेछन् ।